April 2019 – Kalfadhi
Sen. Saciido Xasan Cusmaan “Puntland iyo Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya waan xalinay”
April 30, 2019 Kalfadhi
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay taagnaa Khilaaf culus oo u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya iyo Maamulka Puntland kaas oo ka dhashay qorshaha Dowladda Soomaaliya ee qaadista Imtixaanka Qaran ee Sanad dugsiyeedka 2018-2019 islamarkaana bilaabanaya 11-ka bisha 5aad ee Sanadkaan. Senator Saciido Xasan Cusmaan ayaa Kalfadhi u sheegtay in wadahadal dheer kadib ay Xaliyeen Khilaafkii taagnaa islamarkaana ay Dowladda Soomaaliya ogolaatay in Puntland loo madaxbaneeyo arimaheeda gaarka ah. “Waan xalinay Khilaafkii taagnaa kadib markii aan la kulanay Wasiirka Waxbarashada, sidoo kalane aan kulamo la qaadanay mas’uuliyiin katirsan…
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Senator Naciima Ibraahim Yuusuf ayaa muddo dhowr maalmood ah ku sugan degmada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelada Hoose waxayna halkaasi kawadaan kulamo lagu dhex-dhaxaadinayo beelo halkaasi ku dagaalamay. Xubnahaan ayaa la kulmay Odayaasha dhaqanka ee degmada Wanlla-Wayn gaar ahaan dhinacyada dagaalamay, Maamulka degmada iyo kan Gobalka iyo Saraakiisha Ciidamada Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Sidoo kale waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee Bulshada degmada Wanlla-Wayn. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa Wareysi uu siiyay Kalfadhi waxa uu kaga hadlay waxa uu salka ku haayo Safarkooda…
April 29, 2019 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa maanta Aqrintii Labaad marsiiyey Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga. Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maxamuud Beene-beene, ayaa u sheegay golaha in sharcigaan uu difaacayo, dhiiragelinayana, ganacsiga xorta ah. “Waa shuruuc guud oo qof kasta lagu dabaqayo” ayuu yiri Xildhibaan Beene-beene. Laakiin, xildhibaannada oo aad uga dooday sharcigaan ayaa meelo badan su’aalo ka keenay. Waxay qaarkood soojeediyeen, aqrintooda hindisaha kadib, in meelaha qaar la waafajiyo Dhaqanka iyo Shareecada Islaamka, sida da’da cidda ganacsan karta, oo uu hindisahani sheegayo iney tahay ciddii ka weyn cimriga 18 sano. Sababta…
April 29, 2019 April 29, 2019 Kalfadhi
Waxaa hadda Kooram dhan 148 xildhibaan ku furmay Kukanka 9-aad ee Xildhibaannada Golaha Shacabka. Kulankan, oo ay ahayd inuu furmo 10:00 AM ayaa waxa uu dib u dhacay muddo ku dhaw laba saac. Sababtu waxay ahayd in saacaddii la rabay inuu furmo kulanka uusan buuxin Kooramka. . Laakiin sida ay xildhibaanno ka tirsan golaha u sheegeen Kalfadhi, waxa uu Xeer Hoosaadka Goluhu ogol yahay in hal saac uun dib u dhici karo kulanka golaha. Guddoomiyah Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo kulanka maanta shir-guddoominaya, ayaa sheegay in ajandaha kulanka,…
April 29, 2019 April 29, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Magaaladda Garowe waxaa weli ku sugan xildhibaanada Aqalka sare ee laga soo doorto deegannada Puntland qarkood, kuwaas oo dib u soo noqday khamiistii isla markaasna sheegay in ay doonayaan in ay la tashiyo kala yeeshaan Puntland halku uu dalku u socdo. Shir jaraa’id oo ay goortaas qabteen ayay ku muujiyeen in dalku gelayo xaalad murugsan oo ay tahay in laga wada tashto. Arrimaha wax laga weydiiyay waxaa ka mid ahayd khilaaf dhinaca qaadista imtixaanaadka la xiriira oo u dhexeeya wasaaradda waxbarashadda federaalka iyo tan Puntland. Inta badan xildhibaanada Aqalka sare…
Xildhibaan Axmed Macali Fiqi ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir looga baahan yahay inuu cadeeyo waxa uu ku qabto canshuurta laga qaadao dadka gobolkiisa ku nool. Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in dadka gobolka marka ay canshuurta bixin waayaan lagu dilo aysan macquul ahayn in xisaab-celinteeda la waayo, sida uu hadalka u dhigay. “Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxaa laga rabaa canshuurta dadka Muqdisho lagu dilo, marka ay bixin waayaan, midda la bixiyana wax lagu qabto aysan muuqan, in uu caddeeyo xisaab-celinteeda’ ayuu Xildhibaan Fiqi ku yiri dhigaal uu ku soo qoray Feysbuuggiisa.…
Kulankii 9-aad, Kalfadhiga 5-aad, ee Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa maanta ka furmaya Xarunta Golaha ee magaalada Muqdisho. Sida ay Kalfadhi ogaatay, waxaa Xildhibaannada loo diray fariin loogu sheegayo inuu maanta jiro kulan. Laakiin, lama ogaan inta uu ka kooban yahay ajandaha kulanka golaha ee maanta horyaala xildhibaannada Kulankan, oo baaqday Sabtidii, ayaa maalinkaas waxaa, haddii uu furmi lahaa, looga hadli lahaa Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga. Lama hubo, laakiin waxaa la rumeysan yahay in ajandaha kulanka golaha ee maanta ay ku jirto wali ka doodista hindise sharciyeedkaas. Waxaase walaac taagan ah…
April 28, 2019 Kalfadhi
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay iney bilaabayaan ka-talo-gelinta dib-u-eegista dastuurka dadka gobolada dalka ku nool. War la soo dhigay Feysbuugga guddiga ayaa lagu sheegay in ay maanta arrin ku saabsan aragtidaas kulan uga yeesheen Muqdisho hay’adaha dowliga ah ee ka shaqeeya dib-u-eegista dastuurka. Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka, Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka iyo Wasaaradda Dastuur ayuu sheegay guddigu in ay ku kulmeen Xafiiska Guddiga Dastuurka Baarlamaanka ee ku dhex yaala Xarunta Aqalka Sare. “Kulanka ayaa lagu gorfeynayaa sidii loo bilaabi lahaa la tashiyada dadweynaha ee Dawlad Goboleedyada” ayaa lagu…
Cabdullaahi Cusmaan Faarax: Hogaamiye, kuwa kula shaqeeya ayaa ku toogan doona!
Hogaamintu waxey u baahan tahay dareen aad kula socon karto dadkaaga oo dhan, oo aad ku kala saari karto xaqiiqada ay xambaarsan yihiin kuwa kuu dhow iyo kuwa kaa fog. (Kuwa kula shaqeeya iyo kuwa aanan xilalka hayn). Sida diiwaanka taariikhda ku xusan, hogaamiyaasha fashilmay banaanka lagama soo toogan, ee kuwa la jooga ayaa mindida ku hubsaday, kadib markii ay runtii ka qariyeen oo beentii u qurxiyeen, oo dadka cabashada qaba dambiilayaal uga dhigeen, oo wadaniga caado-qaate uga dhigeen, oo lacagta la boobayo xaq uga dhigeen, oo fashilkiisa guulo uga dhigeen,…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xildhibaan Xasan Sh. Maxamuud, ayaa ka digay in gobolka Banaadir uu ku sii hoos jiro Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS). Waxa uu carrabka ku adkeeyey in ay muhiim tahay in ay malaayiinta ku nool Banaadir helaan xaqooda ah in ay yeeshaan metaald siyaasadeed. “In ka badan 2 milyan – 3 milyan ku dhawaad – dad kula degan in xuquuq metelaad ay yeelan waayaan” ayuu Xasan ku tilmaamay in ay tahay mid aan sii jiri karin. Waxa uu gobolka Banaadir ku amaanay inuu noqday midka kaliya ee suurageliyey…